Saturday August 21, 2021 - 17:07:58 in Wararka by Super Admin
Waagacusub.com - Garabkii Mahdi Guled oo la wada og yahay wuxuu baday shacabka Muqdisho ayaa loo boobayaa loona bahdilayaa garabkii ergadda Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullahi. Cadaaladda daradda muuqato ee laga sugayo Ra'isulwasaare Maxamed Xuse
1- Garabka Mahdi Guled iney isku wada qaateen Gudoomiyahii gudigga, Gudoomiye ku xigeenkii gudigga, Xoghayahii gudigga iyo Diiwaangeliyaha gudigga,
Waa in doorasho la qabto, ergadana la qeybsado, waana in laga fogaado eexda loo sameeyay Ninka ku faana Af Amxaariga ee Mahdi Guled.
Ra’isulwasare Maxamed Xuseen Rooble waxaan kula talinayaa inuusan dhabarka saaran godob iyo taariikh madoow oo aad u fool xun taas oo baabi’in doonta dhamaan shaqooyinkii uu Shacabka iyo Qaranka u qabtay.
Siyaasiyiinta, ganacsatadda, culumada iyo Saraakiisha Ciidanka Hawiye waxaan ugu baaqayaa inaan hortooda lagu bahdilin, laguna boobin Cabdi Xaashi Cabdullahi oo nala joogay lixdan sano.
Mahdi Guled oo guuleeystay waxey ka micna tahay Farmaajo oo guuleeystay, inuu Farmaajo guuleeystana waxey ka micna tahay inaan dib ugu. laabanay gumeeysigii aan ka bogsoonay.